Trump oo dhaqaalihii ka joojiyey WHO ka dib murankii dhexmaray isaga & Tedros | Dhexnimo Media
Home Wararka Trump oo dhaqaalihii ka joojiyey WHO ka dib murankii dhexmaray isaga &...
Trump oo dhaqaalihii ka joojiyey WHO ka dib murankii dhexmaray isaga & Tedros
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisa hakinayo dhaqaalaha la siinayo hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Waxa uu sheegay in WHO ay ku guuldareysatay waajibaadkeeda aasaasiga ahi” marka la eego jawaabta ay ka bixisay faafitaanka cudurka coronavirus.
Madaxweynuhu waxa uu ku eedeeyay hay’addani Qaramada Midoobey inay si xun u maaraysay isla markaana qarisay faafitaanka fayraska dhaliya cudurkani ka dib markii cudurkani uu ka dillaacay dalka Shiinaha, wuxuuna sheegay in ay khasab tahay in lala xisaabtamo.
Trump ayaa horay hay’addaasi caafimaadka adduunka ee WHO ku eedeeyay inay u xaglinayso Shiinaha.
Agaasimaha WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, oo iska difaacayey dhowaan eedeynta Trump, ayaa ku baaqay midnimo iyo hakinta siyaasadeynta xasaraddan caafimaad ee caalamiga ah, isaga oo si gaar ah ugu booriyey Shiinaha iyo Mareykanka inay muujiyaan hoggaan daacadnimo ah.
Madaxweyne Trump ayaa shakhsiyan gudaha dalkiisa lagu dhaliilay sida uu u maareeyay faafitaanka cudurkani, waxayna u muuqataa in culeyska arrintaas ka dhashay uu isna dusha saarayo WHO sida ay aaminsan dadka wax falanqeeya.
Previous articleDeeqdii Imaaraadka Carabtu ka soo dejiyeen Muqdisho oo yaab iyo fajac abuurtay
Next articleMaxaad Ka Taqaan Astaamaha Cudurka Covid19? W/Q: Cabdiraxmaan Rashiid (Dalmar)